Casemiro iyo Dani Alves oo farriin gaarsiiyey ciyaaryahan reer Brazil ah, kaasoo 2,000 oo qumbe ah maalintii hela! %
By Badrudiin Mohamed	 On Mar 24, 2020
Ciyaartoyda Brazil ee kala ah Casemiro iyo Dani Alves ayaa dareen gaar ah u yeeshay ciyaaryahan dhallinyaro ah oo u dhashay dalkooda kaasoo awooddiisa dhan isugu geeyay inuu ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara uu noqdo.
Sheekada Gleisson, oo ah 19-jirka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Petrolina, ayaa soo jiitay qalbiyada dadka reer Brazil laba bilood ka hor markii ay kooxdiisa ka qayb galeysey tartanka Copa Sao Paulo oo markii ugu horreysay kooxdiisa ciyaartay.
Perolina way guuldarreysatay kulan walba oo ay tartanka ka ciyaartay, hase ahaatee kormeerayaashii ciyaartaas daawanaayay ayaa si aad ah ugu riyaaqay qaab ciyaareedka Gleisson.
Waxaa lasoo werriyay in Gleisson iyo aabbihii ay ka shaqeeyaan beer ay ka helaan 2,000 oo qumbe ah maalin walba.
2,000 ee qumbaha ah ee ay maalintii beertooda kasoo guraan ayaa lagu qiimeyay 40 lacagta reals-ka ah, taasoo qiimo ahaan u dhiganta siddeed euro.
Inkastoo uu aabbihii ka caawiyo falitaanka iyo beeridda beertooda, Gleisson ayaa la tababarta kooxdiisa, weliba isagoo aanan heysan gaari uu tababarka ku aado, ama shilimaad uu bas ku raaco si uu 12 kiilo-mitir ugu safro, sidaas darteedna isagoo rucleynaya ayuu ku ordaa heer kul 30 degree ah.
Wiilkan dhallinyarada ah ayaa taageere weyn u ah Casemiro, laacibka Real Madrid ayaana maqlay sheekada Gleisson, waxaana uu diray farriin iyo funaanad.
“Waad u lugeyn kartaa 12, 15 ama 20 kiilo-mitir, balse waa inaad raacdaa riyooyinkaada.” ayuu tilmaamay burburiyaha qaranka Selecao.
Dani Alves ayaa sidoo kale ay gaartay sheekada Gleisson waxaana uu u diray farriin diirran iyo funaanad saxiixan, maadaama ay ka soo wada jeedaan woqooyi-berri Brazil.